सांसद मिया जसले अन्तरजातीय विवाह गरेपछि देश छोड्नु परेको थियो
नेकपा एमालेले समानुपातिक सांसद बनाएकी दाङकी अनारकली मियाँले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण देशनै छोडेर प्रवाशमा जानु परेको तितो विगत छ।
सल्यान जिल्लाको साविक छाँया क्षेत्र गाविस वडा नं. ३ को जिताथान फूलबारीमा २०३२ साल भदौ १७ मा जन्मिएकी सांसद अनारकली मियाले सल्यानकै छाँया क्षेत्र २ निवासी रमेश रेग्मीसँग २०५२ सालमा प्रेम विवाह गरिन्।
मिया र रेग्मी कक्षा १ देखि १० कक्षासम्म एउटै विद्यालयमा सँगै पढेका थिए। २०५२ सालमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि मिया र रेग्मी दुबै दाङको घोराहीस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भए। त्यतिबेलै उनीहरूले वर्षौंदेखिको आफ्नो प्रेमलाई विवाहमा रुपान्तरण गरे। तर, त्यसपछि उनीहरुको जीवनमा निकै उथुल पुथल हुन पुग्यो।
रेग्मीको छोराले मियाँको छोरी विहे गरेपछि उनीहरुले आफन्तबाट निकै मानसिक र समाजिक यातना खेप्नुपर्‍यो। रेग्मी र मियाँको न जात मिल्थ्यो न धर्म नै। त्यसैले उनीहरुलाई यहाँ बसिसक्नु भएन। उनीहरुले पढाई मात्रै छोडेनन् देश नै छोडेर भारत पुगे।
उनीहरू ५ वर्ष भारतमा मजदुरी गरेर बसे। रमेशले एउटा कम्पनीमा काम गर्दा सांसद मियाले त्यहाँ रहेका नेपालीका छोरा छोरीलाई होम ट्यूसन पढाउन थालिन्। उनीसँग तुलसीपुरको भानु बोर्डिङमा केही समय पढाएको अनुभव थियो। उनले त्यसैलाई भारतमा सदुपयोग गरिन्। त्यो बीचमा उनीहरूका दुई सन्तान जन्मिए। छोरी आश्मा र छोरा आषिकलाई नेपाली संस्कार सिकाउनुपर्छ र आफ्नै देशमा फर्किनुपर्छ भन्ने धारणाले चिमोट्न थाल्यो अन्ततः सन्तानकै लागि २०५७ सालपछि यो जोडी दाङ फर्किए।
यतिबेलासम्म आफ्नो श्रीमानको दैलो नटेकेकी उनी ससुरा केशव राज रेग्मीको २०६५ सालमा निधनभएपछि मात्र पहिलो पटक घर गइन्।
सल्यानस्थित श्रीमानको मुल घरमा भने पस्न मन लागेन। घरको केही पर छुट्टै सानो झुपडी हालेर उनीहरू बसे।
ससुराकै मृत्यु संस्कारमा पुगेका भए पनि उनीहरुको संस्कार र परम्परा नमिल्ने भएकाले उनीहरु त्यहाँ सहयोगी जस्तो मात्रै भए। २ वर्षकै उमेरमा बाबु गुमाएकी मियाले बाबुको माया र ससुराको आशिर्वाद थाप्न नपाएकोमा अहिले पनि पछुतो लागेको बताइन्।
‘हामी बच्चा बच्चीलाई नेपाली लवज र संस्कार सिकाउनका लागि र स्वदेशमै उनीहरुको भविश्य निर्माणका लागि फर्किए पनि त्यो हाम्रो लागि फलामको च्यूरा चपाउनु जस्तै थियो,’ उनले भनिन्, ‘न धेरै पढेका थियौं र न हातमा कुनै सिप थियो, त्यसैले जागिर पाउने कुरै थिएन।’
तर पनि उनीहरूले हार मानेनन्। दुई सन्तानको शिक्षा र भविश्यको सवाल थियो। ‘केही त गर्नु नै थियो, त्यसैले हामीले तुलसीपुरमा सामान्य किराना पसल थाल्यौं,’ विगत सम्झनै सांसद मियाले भनिन्।
विस्तारै चुरा र कस्मेटिक पसल पनि थपे त्यसपछि बिस्तारै उनीहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउँदै गएको सांसद मियाले बताइन्। ‘बुबा नभए पनि आमाको सिको गर्दै व्यवसायमा थालेकी हुँ,’ उनले भनिन्।
राजनीतिप्रति गहिरो चासो र रूची भएकी उनले सल्यानको शंखमुल माविमा पढ्दा २०४६ देखि २०४८ सालसम्म नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति यात्रा सुरू गरिन्। त्यतिबेला रमेश रेग्मी पनि नेविसंघमै थिए। तर, २०४९ सालमा मिया अखिल नेपाल महिला संघमा प्रवेश गरिन्।
प्रकाश ज्वाला, उदय बोहोरा र छवि वलीका कारण आफू एमाले बनेको उनले स्मरण गरिन्। त्यसपछि विवाह गरेपछि उनले श्रीमान रमेश रेग्मीलाई पनि एमाले बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिन्। त्यसयता उनी एमालेकी एक सक्रिय कार्यकर्ता भएर अगाडि बढिरहेकी छन्।
नेकपा एमाले दाङ र मुस्लिम इस्तिहाक संगठनमासमेत सक्रिय उनलाई २०७० सालमा एमाले दाङ र इस्तिहाक संगठनले समानुपातिक सांसदका लागि सिफारिस गरेपछि उनी नयाँ बानेश्वर काठमाडौंसम्मको यात्रा गरिन्।
नेकपा एमाले दाङको जिल्ला कमिटी सदस्य र अनेमा संघ केन्द्रको स्थानीय विभाग सदस्यसमेत रहेकी उनी अहिले एमाले राजनीतिमा सक्रिय छन्।
जस्ले श्रीमतीको लागि धर्म र थर नै परिवर्तन गरे
सांसद अनारकली मियाले २०५२ सालमा सल्यान छायाँ क्षेत्र गाविस वडा नं. २ निवासी रमेश रेग्मीसँग अन्तरजातीय विवाह गरेपछि सामाजिक रूपमा जति नै पीडा र यातना खेप्नु परे आफ्नो सफलतामा उनी डगमागइनन्।
विवाह भए लगतै उनको आग्रहमा श्रीमान रमेश रेग्मीले हिन्दु धर्म छोडेर मुस्लिम धर्म अंगाले। त्यतिमात्रै होइन रमेश रेग्मीले अनारकली मियासँग विवाह गरेपछि आफ्नो थर नै परिवर्तन गरेका थिए। उनले हाल आफूलाई (सलिम मिया) भनेर लेखाउने र चिनाउने गर्दै आएका छन्। किन तपाईँले श्रीमान्‌लाई धर्म र थर नै परिवर्तन गराउन लगाउनु भयो भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘प्रेम अन्धो हुन्छ र मेरो खुसीको लागि मेरा पतिले त्यो सबै गर्नुभएको हो।’
सांसद मियाले आफूले आफ्ना पतिलाई धर्म र थर परिवर्तनका लागि कुनै दबाब नदिएको र उहाँले आफू खुसी नै थर अनि धर्म परिवर्तन गरेको बताइन्।
यही कुरा रमेश रेग्मी उर्फ सलिम मियालाई सोध्दा उनले आफूलाई जात र धर्म परिवर्तन गरेकोमा कुनै पछुतो नरहेको बताए। ‘मैले आफू खुसी त्यस्तो निर्णय गरेको हुँ, घर परिवार र आफन्तवाट आलोचना खेप्नु परे पनि आफू सही भएको हुँदा मैले आलोचनाको वास्ता गरिनँ।’
छोरा छोरीसँगै कलेज पढ्दै
सांसद अनारकली मिया हाल बीएड प्रथम वर्षको परीक्षा दिईरहेकी छन्। उनले कक्षा १ देखि १० सम्म पढेको शारदा क्याम्पस शंखमुल सल्यानबाटै उनले स्नातक परीक्षा दिइरहेकी हुन्।
‘विवाह पछि क्याम्पस पढ्ने रहर अधुरै थियो, त्यही अधुरो धोको पुरा गर्न मैले फेरि पढ्न सुरू गरेको हुँ,’ उनले भनिन्, ‘मैले जागिर खानको लागि होइन ज्ञान आर्जनको लागि फेरि कलेज ज्वाईन गरेकी हुँ।’
सकेजति पढ्ने भन्दै उनले उमेरले आफूलाई पढ्न नरोक्ने बताइन्। ‘जति सक्छु पढ्नेछु र पढ्नलाई उमेरले छेक्दैन, त्यसका लागि इच्छा शक्ति भए पुग्छ।’
छोराछोरी काठमाडौंको एक निजी कलेजमा विज्ञान विषय लिएर पढ्दै आएका छन्। छोरी आस्मा खातुनले गोल्डेन गेट कलेजबाट कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेकी छन् भने छोरा आषिक मियाले बानेश्वरस्थित लिभरपुरमा अध्यन गर्दैछन्।
अधिकांश समय छोराछोरीसँगै बस्ने सांसद मियाले आफूले नजानेको कुरा छोरा छोरीसँग सोध्ने गरेको बताइन्। ‘मुख्य गरि म अंग्रेजी विषयका समस्या उनीहरुलाई सोध्छु, किनकि म अंग्रेजीमा अलि कमजोर छु,’ उनले भनिन्, ‘तर उनले नेपाली विषयमा भने छोरा छोरी भन्दा पनि तगडा छु।’
छोरा छोरीलेनै पनि पढ्नुपर्छ भनेर हौसला दिने गरेको सांसद मियाले बताइन्।
एउटी सामान्य नारी सरह श्रीमानको घरमा बस्ने अभिलासा मनभरी भए पनि बिभिन्न बाधा व्यवधानले त्यो पुरा नहुने भएपछि उनले सल्यानको केही जग्गा बेचेर तुलसीपुरमा आफ्नै संसार बसालेको बताइन्।
उनले संविधानसभाबाट सबैको हक अधिकार सुरक्षित हुने उत्कृष्ट संविधान जारी भएको बेला आफू सबैभन्दा खुसी भएको बताइन्।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भदौ २९, २०७४, ०२:०४:२७